Pirezidaantiin Ameerikaa 45ffaan baqattoota biyyoota 7 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuf jedhu });
Pirezidaantiin Ameerikaa 45ffaan baqattoota biyyoota 7 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuf jedhu
Preezdaantiin Ameerikaa Doonaald Traamp baqattoonni biyyoota 7 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuuf.
Murtoon har'a dabarsan dhimma nageenya daangaa fi baqattootaarratti xiyyeeffata.
Yeroo duula na filadhaa Ameerikaa fi Meeksikoo jidduutti dallawa maayila kuma 2 ijaaruuf waadaa galanis dhugoomsuuf, har'a mallattoosaanii akka kaa'anis ni eegamu.
Baqattoonni Sooriyaa, Iraan, Iraaq, Yaman, Liibiyaa, Somaaliyaa fi Suudaan Ameerikaa akka hin seennes qoqqobbii irra kaa'u jedhameera.
Hojimaanni calallii lammiilee biyyoota kanneenii dhufan adda baasu amma diriirfamutti baqattoonni Waashiingitan akka hin seenne ni dhoorkamuun gabaafamaas jira.
Pirezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'anii filatamuuf gaafa duula nafiladhaa jalqabanii hanga ammaatti haasawa waltajjiiwwan gara garaarratti taasisaa turaniin yookaa ijjannoo dhimma tokkorratti qabaniin yookan ammo bilchina dhabuu yaada isaanitiin miidayaa fi hawaasa gara garaatiin qeeqamuun kan beekkaman Doonaald Joon Tiraamp yoo xiqqaate waggoota afran dhufaniif, yooguddate ammo waggoota saddeetiif Ameerikaa bulchuuf masaraa biyyoolessaa White House galaniiru.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalcha biyyoolessummaarratti qabani fi imaammata biyya alaarratti jijjiirama guddaa fiduuf karoorfataniin walqabatee ardiileen hedduun kanaan dura Ameerikaarraa gama maraan fayyadamaa turan miidhuu danda'u jedhamaara. Afrikaan kaneen daran miidhamuu danda'u jedhaman keessatti argamti.Yaada xiinxaltoota siyaas-dinagdee bebeekamoo bu'uura gochuun face2faceafrica.com akka gabaasetti, filatamuun Pirezidaant Doonaald Joon Tiraamp Afrikaa gama hedduun miidhuu danda'a.Inni jalqabaa gama daldalaatiin hariiroo Afrikaan Ameerikaa waliin qabdu
Pirezidaant Doonaald Tiraamp yeroo duula nafiladhaa taasisaa turan Pirezidaantota Ameerikaa kanaan duraa turan keessattuu kaneen paartii dimokiraatawaa bakka bu'uun filatamanii biyyattii bulchaa turan irra dedeebi'uun qeeqaa kan turan hariiroon daldalaa biyyattiin biyyoota biroo waliin uumaa turte fedhii ummata Ameerikaa kan miidhuu fi biyoota biroo kan faayyaddu ture kan jedhuudha. Gama daldalaatiin Ameerikaan biyyoota Afrikaa hanga tokko fayyaduuf tarkaanfiwwan kanaan dura fudhachaa turete hedduudha.Keessaattuu African Growth and Opportunity Act ykn AGOAn biyyoonni ardichaa hedduun oomishaalee isaanii morkiirraa haala bilisa ta'een gabaa Ameerikaatiif akka dhiyeefatan kan eeyyame waan ta'eef daran bu'aa qabeessa ture.Carraan kun uumamuun walqabatee waltiitti daldalli Afrikaa fi Ameerikaa waggaatti gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 12tti akka olguddatu gargaareera. Pirezidaant Tiraamp garuu waliigaltee addaa oomishaalee Afrikaatiif uumame kana dhaabuu danda'u jedhamaara.
Inni lammataa gargaarsa waraanaatiin walqabata.Ameerikaan humna waraana kallattiin erguunis ta'ee meeshaa waraanaa erguun dhimma Afrikaa keessatti hirmaachuun seenaa dheeraa qabdi.Somaaliyaa fi Liibiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa muraasa keessaa buufata humna waraanaa qabdi. Ameerikaan Ijiypti fi Naayijeeriyaa dabalatee biyyoota ardichaa hedduu dhiyeessii meeshaa waraanaa fi deeggarsa malamaltee waraanaa darbees deeggarsa maallaqaa dhiyeessaafi turteetti.Pirezidaant Doonaald Tiraamp garuu deeggarsa waraanaa kana guutumaa guutututtillee yoodhaabuu baatan harka hedduun nihir'isu jedhameetti eegama.
Inni sadaffaan deeggarsa maallaqaa Ameerikaan Afrikaadhaaf gochaa jirtuun walqabata.Yeroo duula nafiladhaa isaaniitti maallaqa Ameerikaa ummata ishitiif malee hiyyeessa addunyaa guutuurra faca'ee jiru sooruuf dirqama hinqabnu jedhanii kan dubbatan Mr. Tiraamp yeroo bulchiinsa isaaniitti deeggarsa maallaqaa Afrikaan biyyattirraa argachaa jirtu dhaabuu ykn xiqqeessuu danda'u jedhamaara.Ejensii Dhimma misoomaa idil addunyaa ameerikaa, USAID jedhamurraa qofa waggaatti yooxiqqaate doolaara Ameerikaa biiliyoona 12 argachaa kan turte ardiin Afrikaa, ammaan booda korojoo maallaqaa Ameerikaarra dhufu eeggachuurra of danda'uuf akka carraaqxu dirqisiisuu danda'a jedhamaara.Deeggarsi Ameerikaarra dhufu kun hin qaqallata taanaan biyyoonni Afrikaa adda-durummaan miidhamuu danda'an kanneen deeggarsa maallaqa alaarratti hirkachuun beekkaman kan akka Burundii,Maalaawwii,Ethiophiya fi Suudaan Kibbaa ta'uu danda'u jedhameera.
Dhimmi biraa yeroo bulchilinsa Pirezidaant Doonaald Tiraamp kanatti Afrikaan ittiin miidhamuu dandeechi jedhamaa jiru godaantotaan kan walqabatuudha.Akkuma duulla nafiladhaa jalqabaniin godaantota guutuu addunyaarraa dhaqanii Ameerikaa dhiphisan ari'uuf dhaadachaa kan turani fi yooxiqqaate miiliyoona 11 kan ta'an gara dhufanitti deebisuuf waadaa kan galan Mr Tiraamp, lammiileen ishi kumatamaan lakka'aman guyyaa guyyaan irraa godaanaa kan jiran afrikaadhaf yaaddoo ta'uun isaa hinoollee.
Godaantoa seeran ala Meeksikoorraa gara Ameerikaa galan ittisuuf daangaa biyyoota lameen walqunnamsiisurratti dallaa dheeraa akka ijaarsisan dubbachaa kan turan Doonaald Tiraamp, Afrikaanota maqaa godaantotaanis ta'ee koolu-galtootaatiin gara Ameerikaa dhaqan ittisuu qofaa mitii sagantaa DV lootarii namoonni abba carraa ta'an hedduun gara Ameerikaa ittiin gala jiranuu dhaabsisuu danda'u jedhamaara.
Filatamuu Pirezidaant Doonaald Tiraampiin Afrikaan tarii fayyadamuu kan dandeechu jijjiirama humna bittaa maallaqa Ameerikaa,doolaara, irratti ta'aa jiruun qofa ta'uu dandda'a jedhaemeera. Imaammata biyya alaa Mr Tiraamp hordofaa jiraniin walqabatee humni bittaa doolaara Ameerikaa hir'ata jira; ammaan boodas daran nihirata jedhameetti tilmaamammaa jira.Kun yoo ta'e humni bittaa maallaqa isaanii daran laafaa kan dhufe biyoonni Afrikaa hedduun fayyadamoo ta'u.Dhimma kanaan walqabatee biyyoonni qabatamaan fayyadamoo ta'uu dandnda'an Afrikaa Kibbaa, Ijipti fi Naayijeeriyaan adda durummaan ka'u.
Lammiileen Ameerikaa dhalata Afrikaa ta'an aadaa hojii cimaa hinqaban jechuun ifatti qeeqaa kan turan Mr Tiraamp xiyyeeffannaan Afrikaadhaf qabanuu baayee xiqqaadha warri jedhan hedduudha.Kanaaf akka ragaatti kan ka'u ammoo yeroo duula nafiladhaadhaa taasisaa turanii hanga ammaatti waltajjiiwwan argatan mararratti dhimma Afrikaa kan dubbatan yeroo muraasa qofa ta'uusati.Mr Tiraamp wantoota dubbachaa turan kanneen hojiirra oolchuu fi oolchuu dhiisuu isaanii yeroon kan deebisu ta'us, ammaaf afrikaanonni gochuu kan danda'an Mr Tiraamp nama gochaa osoo hinta'in nama jechaa qofa hamiin jettu akka dhugoomtu hawwuu qofa.